Amụma afọ 2012 site na Uru | Martech Zone
Joe Pulizzi tinye ọnụ ndepụta nke amụma amụma maka Ụlọọrụ Marketing Content site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 80! Abụghị m onye na-akwado nke Amụma, ọtụtụ mgbe ka ndị folks na-ezighi ezi… n'agbanyeghị ọkwa na ikike ha. M wee a bit nke a kemmeochi obibia m onyinye… ma Joe mmasị na ya na kwuru ya dị ka otu n'ime n'elu 15!
A na-agbakwunye bọtịnụ ọhụrụ na saịtị mmadụ ... Bọtịnụ "mechie" na ndagwurugwu na-adịghị jụụ na ndị na-anaghị agbakwunye mkparịta ụka ahụ. Ọ dị mma, ma eleghị anya ọ bụghị amụma, ọ bụ naanị ọchịchọ.
Na eziokwu niile, agbanyeghị, ọ dị ka ọ na-esiri anyị ike kwa ụbọchị ịkwụsị mkpọtụ ahụ na ịchọta uru dị na saịtị buru ibu nke nwere ọtụtụ onyinye sitere n'aka ọtụtụ mmadụ. Twitter, Facebook na LinkedIn abụrụla ndị SPAM na mkparịta ụka na-enweghị isi… Google+ dị mma n'ụzọ. Ekwenyere m n'eziokwu na anyị chọrọ ụfọdụ algọridim nke na-adịghị eme na-akwalite ndị a ma ama, ma nke ahụ kwa mechie trolls.
Tags: content MarketingỤlọọrụ Marketing ContentJoe Pulizzi
Ihe ize ndụ nke ìgwè ehi na ebo dị iche iche
Dee 31, 2011 na 11: 01 AM
Doug, na incorporation nke a “mechie” bọtịnụ ga-agbanwe. Ka usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya na - ewu ewu, a na - agwakọta ọdịnaya ọdịnaya. Site na Usenet ruo Twitter, igwe okwu ekwesighi ekwesighi ka otu ihe a diri.
Dị ka mgbochi na-elekọta mmadụ dị ka ọ na-ada, isi ihe na-eme nke ọma online obodo bụ ikwu curation.
Dec 31, 2011 na 10:15 PM
Echere m na ị zuru oke, Tim! Mgbe obula m huru saiti nwere SPAM na ihe o kwuru, achotaghi m ikwu ya ebe obu na odi ka ha anaghi acho onye na ekwu.